Accueil > Gazetin'ny nosy > Antananarivo Renivohitra : Mitarazoka loatra ny fanamboaran-dalana
Antananarivo Renivohitra : Mitarazoka loatra ny fanamboaran-dalana
Amin’ny Renivohitra azy dia tokony ho fitaratra eo amin’ny fahatsaran’ny lalana ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Ankehitriny anefa, faritra maro eto Andrenivohitra no tena ratsy, mampijaly fiara ary miteraka fitohanana. Ireo olona mpampiasa ny lalana eny amin’iny faritra Antohomadinika, 67 ha sy Ambodin’Isotry iny no tena mikolay mafy satria potika tanteraka ny arabe, tsy mendrika ho lalana amina renivohitra. Ny zavatra hita miharihary aloha, hatreto, dia efa mihezaka ny manamboatra ireo lalana simba ihany ny kaominina sy ny fanjakana, saingy mitarazoka loatra izany.
Raha ny eny Antohomadinika, 67ha Avaratra sy Ambodin’isotry iny no jerena, efa ho herintaona mahery izao no nanomboka simba ny lalana, ary potika tanteraka amin’izao fotoana izao satria tsy nisy mihintsy ny fikojakojana. Ny lalana eny amin’ny Vatobe mihazo an’Andohatapenaka iny no efa nasian’ny kaominina fanamboarana, volana vitsy lasa izay, ary rehefa vita ny asa dia tsy nisy fitohizana nitohy tamin’ireo faritra manodidina. Tsy fantatra mazava moa ny antony tena mampitarazoka ny fanamboarana, tsy fantatro ihany koa iza no tena tokony hanao ny asa satria raha ny hita teo aloha teo dia samy manao daholo na ny ministeran’ny asa vaventy, ny governoran’ny Faritra Analamanga sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Marihana fa tsy te hahalala izay tena tompon’andraikitra tokony hanamboatra ny lalana ny mponina fa ny hany fantany dia mila hatao haingana ny fanamboarana satria tena mampijaly fiara ary miteraka fitohanana be loatra. Tsy ny eny Antohomadinika, 67ha sy Ambodin’Isotry ihany no ahitàna lalana simba fa amin’ny toerana maro eto Andrenivohitra. Ny filoham-pirenena tsy matetika milaza fa miasa haingana toy ny lamasinina TGV ny fiasan’ny fitondrana kanefa raha mijery ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo dia hita fa mifanohitra tanteraka amin’izany.